Nhau - SICER anotora chikamu mu4th Bangladesh Pepa uye Tissue Technology Exhibition.
Musi waApril 11-13,2019, timu yekutengesa yeShandong Guiyuan Advanced Ceramics Co., Ltd. akauya kuDhaka, guta guru reBangladesh, pamwe ne "Belt uye Road" kuti vatore chikamu mu 4th Bangladesh Paper uye Tissue Technology Exhibition. Chiratidziro ndicho chete pulp uye pepa indasitiri inoratidzira muBangladesh. Chiratidziro chakaunza pamwe chete makambani zana negumi zvine hunyanzvi uye nehunyanzvi muindasitiri yemapepa, ichikwezva zviuru zvevashanyi.
Iyo indasitiri yemapepa muBangladesh parizvino iri mucheche, uye iyo indasitiri seyakazara yakadzokera kumashure kana ichienzaniswa nedzimwe nyika.
Zvese kugadzirwa uye chigadzirwa mhando hazvigone kuzadzikisa kudiwa uye zvinoda kutengeswa kukuru. Parizvino, hurumende iri kushanda nesimba kuvandudza zvivakwa uye kusimudzira hupfumi, uye indasitiri yayo yemapepa ichave nehunyanzvi hwekuvandudza.
Sechiratidzo chinozivikanwa muindasitiri yemidziyo yekugadzira mapepa, Sicer akapinda muchiitiko ichi kekutanga. Iko kuratidzwa kwakadzvanywa kweakakosha nyowani ceramic dewatering zvinoriumba senge silicon nitride, zirconia uye submicron alumina, pamwe nekupfeka-kusagadzikana zvedongo zvikamu zvemapepa michina. Kumuratidziro, vatengesi vazhinji vanobva kuIndia, Bangladesh, Indonesia neChina nedzimwe nyika uye nyika zhinji vakauya kunzvimbo iyi. Munzvimbo yenhaurirano yebhizinesi, kushambadzira uye vashandi vehunyanzvi vanonyatso kuzivisa mashandiro uye hunyanzvi hwehunhu hwekambani kune vatengi, uye pindura mibvunzo zvakadzama.
Shandong Guiyuan Yepamberi Ceramics Co, Ltd inoshanda mukutsvagisa, kuvandudza, dhizaini uye kushandiswa kwezvinhu zvisina kujairika zvemidziyo zvemakore makumi matanhatu neshanu uye ine kodzero dzakazvimirira dzehungwaru dzezvinhu zve ceramic dewatering. mamiriro emusika weBangladesh, simbisa mukana wemusika, tora mikana uye uvandudze pamwechete.